Alaab -qeybiyeyaasha Badeecadaha & Quudiyaha iyo Warshadda - Soo -saareyaasha Shiinaha ee Baalashyada & Quudiyaha
Qalabka sheygan waa bir Carbon/birta aan lahayn
Cabbirka, waxaan leenahay cabbir joogto ah waxaanan soo dhaweynaynaa cabbirka la habeeyay
Naqshado iyo astaan ​​gaar ah ayaa sidoo kale la heli karaa
Baakadaha, waxaan u isticmaalnaa sanduuq bunni ah ama sanduuqa midabka sida aad doorato.
Ku habboon in la cuno raashin loogu talagalay eeyaha iyo bisadaha. Looma baahna inaad mar kale soo iibsato saxanno xayawaanno badan oo dherer kala duwan leh.
Laba Bog oo Ey ah: Waxaa jira 2 baaquli oo birta ka samaysan oo birla'aanta ah, si sahlan loo maydhi karo & u keen ikhtiyaar ku habboon eeyaha si ay wax u cunaan oo wax u cabbaan isla waqtigaas. uma baahnid inaad gacmahaaga iyo jilbahaaga hoos u dhigto si aad u nadiifiso aagga quudinta.
Jawiga Quudinta Kaamil ah: baaquli birta birta ah oo la hakiyey, sii jawi quudin nadiif ah. Saxanka eeygan oo kor loo qaaday wuxuu gacan ka geystaa kor u qaadida dhaqdhaqaaqa cuntada, afka ilaa caloosha, iyo dhererka raaxada leh wuxuu yareeyaa cadaadiska qoorta eeyga marka wax la cunayo.
Waarta Waarta: Maaddada birta ka samaysan ayaa ka cimri dheer oo ka adag qalabka kale sida bamboo, muddo dheer soconaya si loo isticmaalo.
Weelasha eyga oo la saraysiiyo ma siin karaan oo kaliya jawi cunto oo nadiif ah oo ammaan ah ee xayawaanka guriga laakiin sidoo kale waxay si fiican uga fogaan karaan wasakheynta cuntada xayawaanka. Weelasha waaweyn ee eey ayaa sidoo kale ka caawin kara eeyaha inay beddelaan cadaadiska kala -goysyada iyo lafaha, oo aad ugu habboon eeyaha qaangaarka ah.
Weelasha eyda kor loo qaaday ayaa siin kara jawi cunto oo nadiif ah oo ammaan ah oo loogu talagalay xayawaanka guriga ku nool, taas oo si fiican uga fogaan karta wasakheynta cuntada xayawaanka, iyo fijaannada eyga oo sarreeya ayaa caawiya eeyaha inay beddelaan cadaadiska kala -goysyada iyo lafaha, oo aad ugu habboon eeyaha bislaaday.
Naqshad xarrago leh ayaa ku siineysa qurxinta guriga oo aad u qurux badan
Saldhigga birta ee sarreeya, culays ka yar qoortaaga xayawaanka ah markaad quudinayso
Dhakhtarka xoolaha ayaa ku taliyay baaquli birta ka samaysan oo tayo sare leh, nadiif nadiif ah, iska caabiya bakteeriyada
Ku habboon eeyga yar iyo bisadda
raaxo kiciyey eey baaquli quudinta baaquli qubeyska qubeyska biyo istaaga (A)
Qabatooyinka Furaha Furaha, Hanjabaadda Dheriga Dhirta, Farshaxanka Darbiga Birta, Coat Hanger Rack Hooks, Qaansarka Warshada Darbiga, Qabanqaabiyaha Hook Furaha,